निर्देशकको दबाबपछि रेखा र आर्यनले ‘रुद्रप्रिया’ सुटिङ छाडे !, आमा नै पुगिन् बन्दीपुर « Ramailo छ
निर्देशकको दबाबपछि रेखा र आर्यनले ‘रुद्रप्रिया’ सुटिङ छाडे !, आमा नै पुगिन् बन्दीपुर
प्रकाशित मिति : Jun 13, 2017
फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ सुटिङमा तनाव सृजना भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार निर्देशक सुदीप बबी भूपाल सिंहका कारण रेखा थापा र आर्यन सिग्देल बन्दीपुरको सुटिङ स्थल छाडेर राजधानी फर्किने तयारी गरिरहेका छन् । निर्माता रमेश एमके पौडेल देखि रेखाकी आमासम्म बन्दीपुर छायाँकन स्थल पुगेका छन् । रेखा र आर्यनले सट दिन नमानेपछि सुटिङ स्थगित हुने अवस्थामा पुगेको छ । आखिर किन भयो त ‘रुद्रप्रिया’ सुटिङमा तनाव ? के गरे निर्देशकले ?
बुझिए अनुसार निर्देशक भूपालले रेखालाई आर्यनसँग इन्टिमेट सिन दिंन दबाब दिएका थिए । जुन सिन दिनको लागि गरिएको रिहल्सल्सका तस्बिरहरु हामीलाई प्राप्त पनि भएका छन् । हो, यही सिनको लागि निर्देशकले रेखालाई अझै खुल्न दबाब दिएपछि रेखा सन्किएर सुटिङ नै छाडेर काठमाण्डौं फर्कन लागेको बताइन्छ । रेखाले सुटिङ छाडेपछि आर्यन पनि काठमाण्डौं फर्कन लागेको बुझिएको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन देखि प्रदर्शनमा आउने ‘रुद्रप्रिया’ सुटिङ सेटमा तनाव सृजना भएपछि आमा सरस्वती सोमबार बन्दीपुर पुगेकी हुन् ।
के निर्माता र आमाले रेखा आर्यनलाई मनाउँन सक्लान् ? उनीहरुले दिन नचाहेको दृश्य निर्देशकले खिच्लान् या नखिच्लान् ? यसको विषयमा थप जानकारी आउनेछ । तर, यसको बारेमा विस्तृतमा बुझ्न खोज्दा रेखा, आर्यन, निर्देशक र निर्माता कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । फिल्मको सुटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।